Qubsuma Koo 30: Masqalaa fi Arafaa gaafan yaadu keessa kootu na jeeqama - BBC News Afaan Oromoo
Qubsuma Koo 30: Masqalaa fi Arafaa gaafan yaadu keessa kootu na jeeqama
Image copyright Ashenafi Tesfaye
Ashannaafii Tesfaayeen jedhama. Biyya Angoolaa kan Kibba Afrikaa kessaan jiraadha. Itoophiyaarraa ka'ee hangan Angoolaa gahutti haalawwan rakkisoon adda addaa keessaan darbe.
Gazeexessummaa hanga hidhaatti
Wayitan biyya ture, tamsaasa raadiyoo Faanaa 98.1 keessa gaazexxessummaan hojjechaa ture. Jireenya fooyya'aa barbaachaaf jecha imala kiyya isa jalqabaa gara Sudaan, Kaartumittan godhe.
Jireenya Kaartum keessa guddoos utuun hindhandhamiin mana hidhaa 'Umdurmaan' jedhamu keessa ji'a tokkoof haalli na hiisisu uumame. Mana hidhaa kana keessa lammiilee Itoophiyaan baay'eetu ture. akka lammummaakee jibbitu bakka si godhuudha.
Soddaankoo tokko wantawwan kaffalamu qaban narratti baasuun mana hidha kana keessa akkan bahu erga godhe booda, ''Angoolaan hojiif gaariidha,'' waan jedhamuuf gar sana deemuuf murteesse.
Imala gara Angoolaatti godhuuf kara darbaa biyya naa ta'uuf filadhe Keenyattis xiyyaaraan deeme. Buufata xiyyaara Joomoo Keenyaatta akkan gaheenis, viisaa ati qabatte jirtu seeraan ala jedhamuun ammas mana hidhaatti darbatame. Kenyaatti guyyaa shanifan hidhame.
Angoolaa - biyya qoosaa hinbeekne
Waaqayyo nagargaare jennaan akkuman hiikameen gara Angoola dhufe. Biyya kana keessa namoota biyyakoo dabalate baqattoonni biyya biros ni jiraatu. Namoonni Ertiraa hedduufi lammiileen Itoophiyaa lakkoofsan xiqqoo hinta'intu jireenya isaani as godhatanii argamu.
Lammiwwan Itoophiyaa fi Eritraa hojii adda addaarratti bobba'anii argamu. Jaalalaan waliin jiraatus. Wayita ''Habashaan tokko dhufeera jedhamu,'' jalqabarratti hojii kan kennuuf warra Ertiraati.
Doktooronni Itoophiyaarra dhufanis ta'e Injinaroonni Eriraarra dhufan asitti warra suuqii keessa gurguran ta'u danda'u. Angoolaatti yoo hojjette ni guddata yoo qooste garu biyya si ajjeeftudha.
Angoola keessa hadha warrakoofi mucaakiyyaa waliinan jiraadha.
Boomdiyaa hanga Fujiitti
Qillensa ho'aan kan beekamtu Angoolaan, uummanni ishee kan nama kabajaniifi gadoo kan namarratti hinqabaneedha. Karaa dantaasaanii yoo itti dhufte garu hanga ajjechaatti tarkaanfii fudhachuu danda'u.
Afaan Portugaaliin walii glau. 'Boondiyyaa' jechuun akkam bulte; 'Bo'aa-taard' jechuun akkam oolte jechuu wayita ta'u 'Boon-night' ammo nagaan buli akka jechuuti.
Nyaati Itoophiyaa Angoola keessattis ni argama. Bakka xaafii daakuu ruuzii fi kan qamadii waliin makuun hojjetama. Shiroo fi mimmixa Itoophiyaarra arganna, yoo ta'uu baatees biyyatti ollaa Afrikaa kibbarra fichisiifna.
Haa ta'u nyaati aadaa Angoolaa bareedaafi jaalatamaan ni jira. Nyaanni kunis Funjii jedhama. Funjiin nyaata biyya keenyaa keessa marqaan kan walfakkatudha yeroo ta'u kan inni hojjetamus daakuu boqolloorrati.
Biyyakorra waan baay'een yaada. Akka aada uummata Guraagetti waanan guddadheef ayyaana masqalaa baay'een yaada. Aadaa fi jaalalli Itoophiyaa isa ollaan walwaamee waliin nyaatuuf ayyaanaa kabajuuf godhamu sun baayee natti tola.
Jireenyan gazexesitummaan dabarse keessatti 'Ashanaafiin Guraagedha' jechuun qophii masqalaa akkan gabaasuufi achumaan maatii waliin akkan dabarsuuf inni godhama ture sun natti yaadatama. Masqalaafi Arafaa gaafan yaadu keessakootu na jeeqama.
Jireenya gazexeesitummaa koo keessatti sadarkaa lammaffatti waantan yaadadhuu fi kan nakofalchisantu jiru. Keessattu mindaa xiqqa ta'e waan argannuuf yeroo hunda nyaata nu nyaannu tokkodha; 'Adey-Abeba' jedhama.
Nyaanni kun maqaan kun kan kennameef faffatoo buddeenaa baay'ee irratti kalaankala/waaddii hanqaaquu lamaa waan irratti godhamuufi.
Ministerri mummeen, afaaniin isa dubbatan sana hojiitti kan jijjiran yoo ta'eefi haafuura walqixxummaa biyya keenyaarra kan dhufu yoo ta'eef, biyyakootti deebi'e ogummaan jaaladhuun hojiikiyya itti fufuun barbaada.
Yeroo qilleensaa bitachuun, istuudiyoo mataakiyya banchuun hojiikoo itti fufuun barbaada. Akkasumas hojii fiilmii irratti bobba'uufis yaadan qaba.
Wayitan gazexeessummaan hojjechaa turetti qophiilee adda addaan dhiheessa ture. Isaan keessaas Beyeferjuu, Yemeqabir qoffaariwooch, Yemishit bet xebaaqiwooch (gaardooch), yeleelit taksii shufeerooch
Maaltu beeka gaazexeesitoonni baqarra jiru tari guyyaa tokko tamsaasa raadiyoo kan keenya jennu tokko bananne guyya itti hojjennu ni jiraata ta'a. Hangasitti, fuula marsaritii Yenyaa sew be Angoola (namni keenya Angoolaatti) jedhu irratti hojii kiyya isiniif qoodaan tura.
Nagaan naa tura!
Ashannaafii Tasfaayee, Habtaamuu Siyyuum waliin haasa'an.
Yaadannoowwan koo irra caalaan waa'ee mukkeeniifi dhoqqeedha
Qubsuma koo 29: Imalli Mediteraaniyaan irraa baay'ee ulfaataafi sodaachisaa ture